Ahoana ny fametrahana ny mpamily Radeon farany ao amin'ny Ubuntu / Mint | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fametrahana ny mpamily Radeon farany ao amin'ny Ubuntu / Mint
pandev92 | | soso-kevitra, Tutorials / Manuals / Tips
Ho anao izay nanaraka ny vaovao farany momba ny Phoronix, azo antoka fa efa nandre izany ianao 12.4 version an'ny mpamily fitaovana hitondra fiovana goavana avy amin'ny AMD, dia ny dikan-teny farany inona no azon'ny tompona karatra Radeon 2000/3000/4000 ary ahoana no hahakely azy io, tsy manohana ity kinova ity X.org 1.12.
Ubuntu y mint Amin'ny toerana misy anao dia miaraka amina mpamily maimaimpoana izy ireo, azo antoka fa mihoatra ny iray izay manana solosaina finday finday no nahatsikaritra mari-pana avo kokoa noho ny mpamily tompony ary amin'ny tranga sasany toa ahy, eo anelanelan'ny 15 sy 20 degre ambonimbony. Mijery ao Phoronix Hitako fa tena marina io, ary tsy izaho irery no nijaly tamin'io olana io, ka nanomboka nikaroka aho ary nanapa-kevitra ny hitady vahaolana.
Mametraka amin'ny alalàn'ity PPA nataon'i a ity aloha Mpampiasa phoronix, ny git xorg-server-radeon sy ati farany, ny latabatra farany sns.
Manaraka ireto dingana ireto izahay:
Ampianay ny ppa:
Tranonkala PPA: https://launchpad.net/~oibaf/+archive/graphics-drivers
Ny dingana etsy ambony dia vita amin'ny tranga izay efa ananantsika ireo mpamily izay tonga tsy mandeha Ubuntu / Mint, raha tsy izany dia tsy maintsy esorintsika ny mpamily fglrx ny alalan ' Synaptic.
Aorian'izany dia hapetrakay ny fonosana vdpau
Mba hampandeha azy io dia apetrakay ny fonosana latg3dvl-latabatra
Avy eo isika dia afaka mametraka mplayer
Izahay dia mizaha toetra ny hafainganana mpeg2, na dia amin'ny ho avy aza dia toa azo atao ny manafaingana karazana codecs maro kokoa.
Ankehitriny hiadiana amin'ny olan'ny hafanana be loatra. Vitsy no nijery ny anton'izany ary nitaraina tsotra izao momba ny olana, saingy misy ny vahaolana afaka manamaivana azy, antsoina hoe profil izy io, ary afaka mifidy eo amin'ny fiara, ambany, antonony ary avo isika, amin'izany dia afaka mifehy ny angovo an'ny gpu anay. Raha ny amiko dia navelako ho ambany.
Satria vetivety ihany ny fanovana dia ataontsika izao manaraka izao ka manomboka ambany hatrany ny rafitra:
ary ao anatiny dia manoratra izahay:
Vita izao, dia manangona isika.
Niverina izahay ary tokony havaozina ny rafitray ary hiasa tanteraka.
Tsy mitovy amin'ny fampiasana ny mpamily ATI ofisialy, fa farafaharatsiny ity mpamily maimaimpoana ity dia mihatsara ary azo antoka fa amin'ny ho avy tsy ho ela dia afaka mankafy ny haingam-pandeha horonantsary feno isika, ny hany zavatra tena tsy mandeha dia ny tselatra, tsy ataoko. Tsy haiko tsara ny momba an'io. satria, saingy, hiandry ny fanatsarana hatrany aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » soso-kevitra » Ahoana ny fametrahana ny mpamily Radeon farany ao amin'ny Ubuntu / Mint
Atsipiko io, manangona isika.
Eny ary, vita izany.
Na izany na tsy izany, tena tsara ny vahaolana fa amin'ny Phoronix dia lazain'izy ireo ihany koa fa ny AMD Drivers dia mihatsara tsikelikely, izay heveriko fa tsy azo ekena satria ny sisa amin'ny fifaninanana dia efa manana ny fanohanan'ny OpenCL, OpenGL somary lava, saingy mandroso sy manohana X. org tsy misy olana. Ny iray hafa dia rehefa tonga i wayland, izay hotohanan'i Noveau sy mpamily hafa maimaimpoana fotsiny, dia tsara raha nomena andraikitra hanohana an'i Wayland i Nvidia, AMD ary i Intel fa nolavin'i Nvidia tamim-pifanarahana nefa amin'ny fotoana maharitra dia hilavo lefona .
Avelako ho anao ny fitsipi-pitenenana, izay mampiavaka anao manokana. Ny mpamily amd maimaim-poana dia manohana zavatra maro sahady ary ny hafa dia novolavolaina, raha raisina ho mahatsiravina ny fanohanana ny mpamily mihidy amin'ny opencl, tsy afaka manantena zavatra bebe kokoa amin'ny maimaim-poana ianao, ho hitantsika, raha mila fampahalalana bebe kokoa eto:
407 andro tsy amboarina ny diksionera ... ahitsy "Echo" dia omeo h ... Vita.
Na azonao atao ny mampiasa beta, 12.6.
Ny beta 12.6 dia tonga tsy misy fanohanana ireo karatra alohan'ny andiany 5000, farafaharatsiny ny radeon 4650 ahy, tsy mandeha izy.
Mahamenatra ... 🙁 Mihabetsaka ny sisa tavela ho azy ireo hanilika ilay iray ananako, amin'ny andiany 5000.
Misy 5000 eo ho eo izay manana tena 4000, manantena aho fa tsy nandatsaka ny iray tamin'ireny ... xD, heveriko fa ny 5000 anao dia mbola manana roa taona sisa tavela.
Raha ny fahazoako azy dia nilaza izy ireo fa indray mandeha io famotsorana io, raha ny vakiako raha misy kernel vaovao na xorg mivoaka ireo mpamily ireo dia tsy haharitra mihitsy izany toa mahamenatra fa tsara ny manova karatra.
Sudo akon'ny "ambany"> / sys / class / drm / card0 / fitaovana / power_profile
Mety amin'ny karatra rehetra sy amin'ny mpamily ve izany?
Eny, ho an'ny rehetra, afa-tsy ny andian-dahatsoratra 7000, tsarovy fa rehefa averinao indray ny fikirakirana, raha tsy hoe tahirinao amin'ny rc.local
Jordi Verdugo dia hoy izy:
Misaotra betsaka amin'ity lahatsoratra ity, nanampy ahy hanana mpamily maimaimpoana farany ho an'ny ATi HD4330 aho. Ny olana nananako: ny video amin'ny Youtube dia hita miaraka amin'ny loko tsy izy. Amin'ny farany, ny vahaolana dia tsotra toy ny fanesorana ireo fonosana mifandraika amin'ny VDPAU satria toa ny tselatra Youtube no nampandeha azy. Ny zavatra mampihomehy dia ireo tranonkala misy sary mihetsika hafa toa an'i Vimeo raha toa tsara ny lokony, ka nihevitra aho fa tsy mandeha izany.
Eto ary ireto fonosana nofonosiko ireto: vdpau-va-driver ary libg3dvl-mesa.
Tonga lafatra izao ny zava-drehetra.
Valiny tamin'i Jordi Verdugo
Qugar dia hoy izy:
Ratsy ny tselatra satria misy olana amin'ny fonosana libvdpau12.04 amin'ny karatra Nvidia ny kinova ubuntu 1, ary tsy ho gaga aho raha misy zavatra mitovy amin'ilay nolazainao tamin'ity lahatsoratra ity: vdpau-va-driver.
Ao amin'ity rohy ity ny fampahalalana rehetra: http://askubuntu.com/questions/117127/flash-video-appears-blue
Mamaly an'i Qugar
Fampiasana VIM: Basic Tutorial.
Ny ankamaroan'ny vakiana amin'ny Andao hampiasa Linux: Mey 2012